Apple inoburitsa watchOS 7.3.3, iOS 14.4.2 uye iPadOS 14.4.2 | IPhone nhau
Gadziridza masikati! Hongu iChishanu haisi Chipiri, uye kwete, hazvisi zveshanduro dzatinogona kutonakidzwa nekuvhura kumeso kweiyo iPhone (tichishandisa mask) neApple Watch ... Masikati ano Apple yatanga zvinyorwa zvepamutemo zvewatchOS 7.3.3, iOS 14.4.2 uye iPadOS 14.4.2 kugadzirisa zvikanganiso nekuvandudza kuchengetedzeka kwemaitiro.
Hapana chimwe chinotaurwa murondedzero yeshanduro idzi nyowani uye isu hatisi kuwana dzimwe nhau kana nhau dzataurwa pamusoro apa. Chaizvoizvo zviri zvemhando dzekuchengetedza usawedzere dzimwe nhau kupfuura idzi.
Isu tinoona zvichishamisa kugamuchira vhezheni itsva neChishanu asi hachisi chinhu chinobuda mune zvakajairika munguva dzazvino dzeApple. Dzimwe nguva inovhura vhezheni senge izvozvi, nekuda kwechimwe chikonzero chakakosha uye mune iyi kesi inofanira kunge iri kubvira shanduro dzave kuwanikwa yekuisa kwemaminetsi mashoma.
Kuisa idzi shanduro nyowani idzo dzinokurudzirwa zvakasimba kuti uzviite nekukurumidza sezvazvinogona, isu tinofanirwa kuenda ku Zvirongwa> Zvakajairika> Software kugadzirisa kana tisina otomatiki inogadziridza inoshanda. Chero zvazvingaitika, zviri nani kuti uongorore chikamu ichi kuti uone kuti akaiswa. YeApple Watch yeuka kuti inofanirwa kunge iri mubhadharo yepasi uye iine 50% bhatiri kana zvimwe. Vanoratidzika sedzakakosha shanduro kunyangwe isu tisingavone shanduko mukugadzirwa kana mashandiro, saka tinokurudzira kuisirwa nekukurumidza sezvazvinogona
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Apple inoburitsa watchOS 7.3.3, iOS 14.4.2, uye iPadOS 14.4.2
Apple inotungamira kutenga kwemakambani enjere ekunyepedzera mumakore apfuura